QGIS: Barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed | Laga soo bilaabo Linux
QGIS: Barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed
Gerak | | Android, Aplicaciones
GIS ama GIS (oo loo soo gaabiyay Ingiriis ahaan) waa isdhexgal abaabulan oo agab ah, softiweer iyo xog juqraafiyeed si loo soo qabto, loo kaydiyo, loo maareeyo, loo gorfeeyo loona muujiyo macluumaadka ku saabsan isweydaarsiga isweydaarsiga ee dhammaan noocyadiisa oo u oggolaanaya in lagu tilmaamo juqraafi ahaan waxbarashadooda ama maamulkooda.
GIS waa qalab aad u qalafsan, waxay leeyihiin xog ururin juquraafi ah oo u oggolaanaysa macluumaadka ku jira in loo kala saaro lakabyo, habkanna tarjumaadda ayaa ka fudud uguna dhakhso badan. Intaa waxaa dheer, GIS waa mid aad u jilicsan oo ku xiran codsigooda, u oggolaanaya dadka isticmaala inay abuuraan su'aalo is-dhexgal ah, falanqeeyaan macluumaadka goobaha, ay wax ka beddelaan xogta, khariidadaha iyo soo bandhigaan natiijooyinka dhammaan howlahaan, sidan oo kale codsigooda wuxuu ku jiraa sawir-gacmeedka, qorsheynta magaalo, qiimeynta saameynta deegaanka, qadiimiga, iyo baaritaano cilmiyeed fara badan.
Waxaa jira GIS badan oo la heli karo maanta. Bulshada bilaashka ahi waxay si aad ah uga qayb qaadatay horumarinta barnaamijka loogu talagalay nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed ee il furan. Tani waa halka mid ka mid ah qalabka software-ka ee ugu awoodda badan bilaashku yimaado: QGIS.
QGIS (hore GIS Quantum) waa software GIS ee lambar bilaash ah, oo shati ku hoos jira GNU-GPL, soo saaray Furan Isha Aasaasiga Geospatial (OSGeo) in C ++, kaas oo u oggolaanaya muuqaalka, tafatirka iyo falanqaynta xogta juqraafiyeed.
Si la mid ah GIS-ta kale ee jirta, QGIS waxay u oggolaaneysaa abuuritaanka khariidado leh lakabyo fara badan oo lagu soo ururin karo qaabab kala duwan, iyadoo ku xiran codsiga. Laakiin astaamaha dhabta ah ee ka dhigaya QGIS aalad awood leh ayaa ah:
Taageerada SpatiaLite, ORACLE Spatial iyo PostGIS ballaarinta, taas oo ku dareysa taageerada walxaha juqraafiyeed ee keydka xogta, una rogaya keydka xogta.
Waxay u oggolaaneysaa abuuritaanka khariidadaha iyada oo loo marayo lakabyada (unugyada) ama lakabyada vector (khadadka iyo geesoolayaasha), oo taageeraya qaabab badan, Shapefile, ArcInfo, MapInfo, GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, iwm.
Waxay ku shaqeyn kartaa nidaam kasta oo ka shaqeeya, GNU / Linux, BSD, Unix, Mac OSX iyo Windows
Mid ka mid ah astaamaha ugu yaabka badan ee QGIS waa awooddeeda la qabsiga adeegsadaha. Iyada oo la adeegsanayo qaab dhismeedka qalabka elektiroonigga ah iyo maktabadaha ay leeyihiin, waxaa suurtagal ah in la abuuro fiilooyin diiradda saaraya baahida mashruuc kasta, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku sameysato lakabyo macluumaad dhab ah oo xiiso leh khariidad kasta. Xitaa waa suurtagal in la abuuro codsiyo cusub oo ka hooseeya C ++ iyo Python code.
QGIS waxay leedahay nooc mobilo ah oo loogu talagalay nidaamka hawlgalka Android, oo ah nooc lagu hagaajiyay taabashada qalabka. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho Geolocation ee qalabka mobilada si aad ugu isticmaasho GIS booska isticmaaleha hadda.
Waqtigaan la joogo, QGIS waxay gaartay nooca 2.12, waxayna leedahay beel aad u tiro badan oo wax ku darsada oo ka shaqeeya cusbooneysiinta joogtada ah iyo ciladaha ku dhaca GIS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Android » QGIS: Barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed
Aad bay ufiicantahay waxaan u isticmaalaa sameynta qorshayaal fudud, waxaadna ka rakibeysaa meelaha lagu keydiyo debian, ubuntu, fedora, hat cas.
Debian deggan waxaa jira nooc ka mid ah 2.4 ama 2.04, waadna ku rakibi kartaa nidaamyada qaanso-goobeedka aur.
KeePass: Maamul lambarkaaga sirta ah si badbaado leh oo xor ah.
CAdESoL waxay daahfureysaa shaabadda: Shirkadda Certified